7 Waxyaabood Oo Haweenka Ay Ka Eegaan Ninka Kahor Inta Aysan Jacayl U Qaadin - Aayaha
Home»Editor's Picks»7 Waxyaabood Oo Haweenka Ay Ka Eegaan Ninka Kahor Inta Aysan Jacayl U Qaadin
Waxaa jira 7 waxyaabood oo haweenka ay ninka ka eegaan kahor inta aysan jeclaan.
Nin shaqo wanaagsan heysta
Xaqiiqda horey ayaa loo sheegay, badanaa haweenka waxay rabaan nin heysta shaqo uu lacag wanaagsan ku qaato, ama xittaa ugu yaraan mushaar macquul ah oo mustaqbalka wax wanaagsan siinaya. Lacagta waxay wax walbo ka dhigtaa kuwo sahlan — Haweeneydee aanan rabin in quraacda loogu keeno sariirta ama iyadoo dalxiis ku jirat?
Halkaan dabeecad waa mida ay haweeney walba ka eegto ninka. Waxaad ugu yeeri kartaa kalsooni ama is aaminsanaan, balse hal mid ayaa la hubaa — dabeecaddaan waxay ninka ka dhigtaa mdi ay indhaha haweeney walba qabtaan.
Nin madadaalo badan
Cilmi baaris kala duwan ayaa lagu sheegay in tan sidoo kale ay tahay waxa ay haweenka ragga ka eegaan isla markaana ku jeclaadaan. Ninka si joogto haweeneyda uga dhoolla cadeeysiiya waa mid aad ugu dhow inuu hanto qalbigeeda.
Nin siinaya farxad
Haddii ay agtaada ku dareento raaxo iyo farxad way fududahay inaad hanatid qalbigeeda oo aad gabi ahaanba ku guuleysatid.
Ninka naftiisa daryeeda
Ma jirto gabar rabta nin kharriban oo wasakhle ah; haweenka waxay rabaan nin hagaagsan oo naftiisa si aad ah u daryeedla. Noqo nin nadaamsan oo muuqaalkiisa quruxsanyahay oo nadaafad leh markaas way fududaaneysaa in lagu jeclaado.
Ninka sheekada wanaagsan
Tani waa mid kale ay haweenku ragga ku jeclaan. Wada sheekeysiga wanaagsan wuxuu isfaham iyo heshiis ka dhex dhaliyaa nin iyo naag oo israba. Sidoo kale wuxuu sababaa in qofba qofka kale uu barto; intabadan ragga way ku wanaagsanyihiin wadahadalka.
Ninka dadka kale xushmeeya
Xushmeey dadka, haweeney kasta ayaa jecel ninka xushmadda leh. Waxay gabar walba ogaaneysaa in xushmad ay kaa heleyso haddii ay ku hesho oo ay xaaskaaga noqoto, waana sababtaas tan ay haweenka u jecelyihiin ragga xushmadda badan.